Bala ileveli yeqhwa: izici zezemvelo nezici | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Enye yezinto ezibalulekile maqondana nokubikezela isimo sezulu ukwazi ukuphakama lapho iqhwa lizovela khona. Lokhu kwaziwa njenge abale iqhwa ezingeni. Ukuvela kwamanzi esigaba esiqinile ngesikhathi semvula akuthinti nje kuphela imisebenzi yezomnotho nezindawo ezisengcupheni, kepha futhi nanoma yiluphi uhlobo lomsebenzi wansuku zonke.
Kulesi sihloko sizokufundisa ukuthi ungalibala kanjani izinga leqhwa nokuthi libaluleke kangakanani.
1 Bala izinga leqhwa
2 Ukuphakama nokushisa
3 Ithempelesha yokubala ileveli yeqhwa
4 Umswakama, iphuzu lamazolo nezintaba
Lapho imvula yenzeka ngendlela eqinile, ithinta inani elikhulu lemisebenzi yabantu. Kunezindawo ezisengozini kakhulu njenge ukuhamba ngomgwaqo nangomoya, imisebenzi yangaphandle nemisebenzi yokuqwala izintaba. Cishe noma imuphi umsebenzi wansuku zonke nokuphila emadolobheni amakhulu kungathinteka eqhweni. Umehluko ezingeni leqhwa elingamamitha ayi-200 ungasho umehluko phakathi kosuku lwemvula nokuwa okuphelele kwedolobha ngenxa yeqhwa. Kufanele ujwayele amadolobha lapho iqhwa livame kakhulu lapho ulungiselela lo mkhuba nezingozi eziwenzayo.
Siyazi ukuthi izinga lokushisa lidlala indima ebalulekile uma kukhulunywa ngezinhlobo ezahlukahlukene zemvula. Isithwathwa kungenzeka kakhulu senzeke lapho ubukhulu bomoya bunamazinga okushisa angaphansi kancane kuka-0 degrees noma avale. Khumbula ukuthi lolu hlu lwamazinga okushisa kufanele lube khona ebusweni bendawo esikuyo. Uma sibheka ukushisa kwesisindo somoya, sithola ukulinganiselwa, ezimweni eziningi, okungenele. Kuyashesha lapho sikubona lokho kunezinye izinto ezingaholela emaphutheni lapho kubalwa izinga leqhwa bese kufika izinkinga. Izinkinga ezisuselwa ekwenzeni isibikezelo sezulu.
Ukuphakama nokushisa kuyizinkambu zokuqala ezivame ukulondolozwa ukuze kubalwe izinga leqhwa. Kungenye yezinto zokuqala ezisinikeza umkhondo wokuthi izinga leqhwa lingaphakama kangakanani. I-0 degree isotherm ulayini lapho lokhu kushisa kugcinwa khona ekuphakameni okufanayo. Okungukuthi, ukuphakama lapho izinga lokushisa linegethivu ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. Imvamisa, Ukuguqulwa okushisayo akwenzeki ezingqimbeni eziphakeme, kepha futhi kungenzeka. Iqhwa ngokuvamile liqala ukuncibilika ngaphansi kwaleli zinga. Kujwayelekile ukuthi amakhekhe eqhwa okuqala esiwatholayo angamamitha angamakhulu ambalwa ngezansi kwe-isotherm. Kulezi zindawo sinamazinga okushisa anamanani amahle kancane ngaphezu kwama-degree angu-0.
Enye ipharamitha evame ukubonwa izinga lokushisa ekucindezelekeni kwe-850 hPa. Imayelana ne- inani lomfutho womoya lapho kutholakala khona cishe amamitha ayi-1450 wobude. Inzuzo yokusebenzisa lolu hlelo lokubheka ukubona ukushisa kwesisindo somoya ukuthi limelela kakhulu izinga lokushisa elikhona emazingeni aphansi. Enye inzuzo yalolu hlobo lwesistimu yokubhekisisa ukuthi yehlukaniswe ngokwanele nomhlabathi ukuze ukuhlukahluka kwendawo, imisebe yelanga nemijikelezo yemini nobusuku kungaphazamisi izinga lokushisa. Ngenxa yale mingcele kungenzeka ukubala izinga leqhwa kalula kakhulu.
Ithempelesha yokubala ileveli yeqhwa
Ngaphandle kokungabaza, izinga lokushisa liyindawo ebaluleke kakhulu kwezemvelo yokubala izinga leqhwa. Ukuhlaziya kuphela amazinga okushisa emazingeni aphansi kakhulu, kungabonakala uma siqhubeka nokuba nezinga leqhwa elibalwe kahle. Ngamazinga okushisa afanayo emazingeni aphansi, izinga leqhwa lingahluka. Isizathu salokhu kwehluka kungenxa yamanani wokushisa atholakala kuzendlalelo eziphakeme. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi yonke imidwebo namatafula wokuqondisa ukubala izinga leqhwa imvamisa kufaka amazinga okushisa afike ku-500 hPa wengcindezi yasemkhathini. Kulolu hlobo lwengcindezi sizithola siphezulu ezindaweni ezingamamitha angama-5500 ngaphezu kolwandle.
Uma sithola umoya obandayo phakathi nezendlalelo eziphakathi, kukhona ukukhuphuka nokuwa komoya okungadala ukwehla kwamazinga okushisa. Uma sithola imvula evamile kulezi zindawo, kuzoba nokwehla okukhulu ezingeni leqhwa. Lokhu kwehla okungazelelwe kuvame ukusho ukuthi amamitha angamakhulu ambalwa ephansi kunalokho obekulindelekile. Icala eleqise kakhulu okutholakala ukuthi likhona nini umoya ubanda ngokwanele futhi awuzinzile ukuphakama futhi ungadala ukuhlangana okujulile neziphepho. Kukulezi zimo ezeqisayo lapho izinga leqhwa lingahle liye ngaphezu kwamamitha angama-500. Lapha kuthambekele ekuphazamiseni imvula futhi kuzoholela ekwehleni kweqhwa okukhulu nangalindelekile.
Lezi zimo zivame ukwenzeka ngezikhathi ezincane zasebusika nasezindaweni lapho kungakhithiki khona njalo, kepha iqhwa minyaka yonke. Izingcindezi ze-850 kanye ne-500 hPa azisethi amanani. Ezindaweni ezinengcindezi ephezulu kanye ne-geopotentials ephezulu singathola iqhwa ngaphezulu. Ngakolunye uhlangothi, zingatholakala futhi ekucindezelekeni ukuthi kuyabanda kakhulu futhi kujulile ngoba kwenzeka ezindaweni ezahlukahlukene ze-troposphere ezinama-geopotential aphansi kakhulu. Kulapha lapho singathola khona amanani engcindezi angama-850 hPa kumamitha ayi-1000 kuphela wokuphakama.
Ukuze iqhwa libekhona kulezi zindawo kumele kube nokushisa kwemvelo okungu-0 degrees ngale ngcindezi yasemkhathini nanjengokuma komhlaba kwamamitha ayi-1000.
Umswakama, iphuzu lamazolo nezintaba
La maphuzu ama-3 yizinto ezizosibeka esimweni lapho kubalwa izinga leqhwa. Umswakama ulungile impela. Ezindaweni ezinomswakama ophezulu, amakhekheba eqhwa ancibilika ngokushesha futhi ngamamitha nje angama-200 ngaphansi kwesiqu esingu-0 degree. Ngakho-ke, kulezi zindawo imvula evamise ukuba yimvula. Lapho ungqimba lomoya owomile luvela endaweni eseduze nangaphezulu, amakhekhe eqhwa angakwazi ukugcina ukwakheka kwawo kungancibiliki isikhathi eside. Uma umswakama uphansi kakhulu futhi nezinga lokushisa lilungile, ifilimu lamanzi ngokuqinisekile lizoqala ukwakheka ebusweni bamakhekheba eqhwa. Uma umswakama uphansi kakhulu, amanzi aqala ukwenziwa, amunce amandla emzimbeni uqobo nasemoyeni ozungezile.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezici okufanele zicatshangelwe ukubala izinga leqhwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Bala izinga leqhwa